Baabuur qadiim ah oo qaawan waa shiraac laftiisa laftiisa ah | Abuurista khadka tooska ah
Baabuur duug ah, qaar qasacadaha buufinta ah iyo qaar calaamado ku leh bartamaha magaalo weyn
Waxaa jira siyaabo badan oo dadka lugaynaya loogu mari karo waddo kasta oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ka qaybgal mashaariicda farshaxanka iyada oo aan ujeeddo laga ahayn tan. Ha u ogolaadaan kuwa socod ku maraya waddo sida ay doonaan xorriyad buuxda iyagoo aan ku soo rogin xeerar si wadajir wax looga faa'iideysto.
Tani waxay ahayd fikrad weyn ee Mashruuca Farshaxanka Dacia taasi waxay ka caawisay dadka inay hal-abuurnimo yeeshaan oo ay isku muujiyaan meel aan badanaa loo ogoleyn inay sidaas sameeyaan. Gaari guridda cad ayaa la dhigey bartamaha magaalada Cluj-Napoca ee Romania, wax yar ayaanna ku noqon karnaa iyadoo aan muujin karno awoodda muujinta ee muwaadiniinta aagga.
Tani waa fikradda ka dambeysa mashruuc ee farshaxan iskaashi iskaa ah taas oo aad ku haysato gaari duug ah oo duug ah, qaar ka mid ah daasadaha midabada lagu buufiyo iyo calaamado qaarna dhammaadku wuxuu noqon karaa sida ku dhacda Mashruuca Farshaxanka Dacia.
Laga soo bilaabo carruurta, dhalinyarada ama dadka waaweyn ayaa tagi kara dejinta fikradahaaga hal-abuurka ah si wadajir ah loo sameeyo shaqada ugu dambeysa ee gaarigaan, kaas oo la xoqi karo kahor intaan loo rogin bir duug ah. Qaab wanaagsan oo dib-u-warshadayn ah si qof waliba ugu daayo inuu uumiga ku buufiyo buufinta iyo astaamaha midabka leh isla markaana uu hal-abuurnimadiisa oo dhan ka helo gudaha.
Fikrad taas uma baahna miisaaniyad badan Taasina waxay ka sii badan tahay ujeedka ah in la dhigo shiraac waxyar ka duwan bartamaha waddo taasna waxay hubaal ka dhigeysaa kuwa lugeynaya inay dareemaan in ka badan isku dayyada kale ee golaha degmadu yeelan karaan.
Ugu dambeyntii gaariga wuu waashay, Laakiin nolosha lafteedu miyaanay wax waalli ahayn? Waxaad kala socon kartaa mashruucan bogga Facebook diyaar u ah.
Muunad kale ee farshaxanka magaalooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Baabuur duug ah, qaar qasacadaha buufinta ah iyo qaar calaamado ku leh bartamaha magaalo weyn
8 Adobe ka dib Raadka Plugins nashqadeeye kastaa waa inuu wax ka ogaadaa